It is me. Ko Niknayman.: လက်ဆွဲတော်ကြီး။
ဘေးက အိတ်ဆွဲပြီး လိုက်နေတဲ့သူက ကိုယ်ရေးအရာရှိ ဗိုလ်မှူးးကြီးစိုးရှိန်ပါ။ မြန်မာပြည်မှာမွေးတဲ့ တရုတ်လူမျိုးစစ်စစ်ပါ။ မြန်မာပြည်မှာ မတရားချမ်းသာတဲ့ စာရင်းထဲမှာ သူလည်းပါပါတယ်။
လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်က ဝန်ကြီးတစ်ဦးနဲတွေ့ ချင်ရင် တွေ့ ခွင့်ရဖို့သူက ချိန်းပေးခ(၁၀)သိန်း တောင်းပါတယ်။ ဘောလုံးပွဲကို သိန်းချီပြီး အရမ်းလောင်းပါတယ်။ သူ့ မိန်းမက သစ်တောဝန်ကြီးဌာနက ညွှန်မှူးဖြစ်ပြီး မတရားတောင်းပြီး ဘဝ မေ့နေတဲ့ မိသားစုပါ။
ပြည်သူ့ ရသူများ စာရင်းမှာ သူတို့ မိသားစုကို ထည့်သွင်းသင့်ပါတယ်။ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်ကို ချောဆီထည့်ပေးနေ မြှောက်ပေးနေတဲ့ နံပါတ်တစ်တရားခံက သူပါ။ ပြည်သူတွေ သိရအောင် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Posted by Ko Niknayman at 10:44 AM